Gameplay qoro dibna uploading waxyaabaha u goobood oo kala duwan waxaa la isku dayaa in uu ka Waali dadka muddo ah hadda iyo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in user waa in la hubiyo in barnaamijka ugu wanaagsan ee la soo bixi sameeyo. Waxa aan ka dhigi doono oo kaliya looga cabsado oo lagu qoro laakiin sidoo kale u oggolaan doona in user si loo hubiyo in saamaynta ay la socoto gudahooda si loo hubiyo in ugu fiican iyo farsamooyinka ugu horumarsan yihiin codsatay si ay u qoraan gameplay ah. Tutorial waa dhan oo ku saabsan barnaamijka ciyaarta ciyaarta iyo talooyin la xiriira in ay tahay in la dalbadaa ugu fiican.
Sidee si ay u helaan wax sax ah?
Top 5 talooyin ku saabsan taariikhqorihii gameplay
Waa mid ka mid ah fikradaha in uu xaqiijiyey in user helo ugu wanaagsan ee lagu sameeyey oo aan wax arrintan oo qayb ka ugu weyn ee ay tahay in la tixgeliyo in arrintan la xiriira yahay waa xaqiiqda ah in dib u eegis user iyo sidoo kale rating barnaamijka waa in la tixgeliyaa ka hor ugu fiican ayaa la soo iibsaday ama la soo bixi lacag la'aan ah. Si kasta ha noqoto tayada barnaamijka waa dhan waxa ay arrimaha iyo sabab la mid ah, waa in la tixgeliyaa ka hor inta shaqada la sameeyo. Waxa kale oo ay ka dhigi lahaa hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan oo laga cabsado oo gobolka ka mid ah muuqaalada tahay waxaa ku riyaaqay daryeelka iyo jidkii ka kaaftoomi lacag la'aan ah.
Sababaha kale waxaa ka mid ah shaqada ee barnaamijka iyo qaabka guud. Waxaa sidoo kale in la xuso in khariidad waa wax taas loo hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada farshaxanka iyo lambarka dajinta barnaamijka in uu leeyahay interface fudud ee uu ka badan yahay mid ka mid ah isagoo interface adag in waa user saaxiibtinimo aan. Sidaa darteed waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in user waa in ay tixgelisaa waxyaabaha lagu xusay qaybtan si aad u hubiso in natiijada waa sida ugu fiican ee jeer oo dhan.
Ka dib waa sareysa 5 talooyin taas oo ay tahay in la tixgeliyo si ay u hubiyaan in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada tahay marka la isticmaalayo barnaamijka software gameplay kuwan oo hubiyo in isticmaalka yahay oo dhan jeer ku fiicnayn ka dhigi doonaa:
1. jidka soo saarka iyo qaab
User wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in jidka wax soo saarka la doorto iyo qabanayaan si fursadaha barnaamijka ayaa sidoo kale browsed. Waxa kale oo hubin doona in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada tahay waa la eego sida file saarka waxaa laga heli karaa si fudud oo ku qanacsan. Waxa kale oo uu oggolaan in user si loo hubiyo in file ee waa in la uploaded waxaa laga helaa si fudud oo ku qanacsan. Arrintan oo si fiican u yaqaanna arrintan la xiriira ayaa sidoo kale u oggolaan inay user si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican, iyo sidoo kale in aad nuqulka files si uu meel kale si loo wareejiyo users kale.
2. Screenshot ayaa
Under qaybtan user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in Screenshot waxaa gundhig iyo waxaa sidoo kale uploaded fudayd iyo qanacsanaanta. Waxa kale oo uu oggolaan in user si loo hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah tahay natiijada laga helo iyo qaab ku jirta oo waafaqsan shuruudaha user la soo xulay. Waxa kale oo uu oggolaan in user si uu u hubiyo in qaabka qaadashada meel yar la doorto:
3. jir ah halkii goobaha labaad
Waa mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan oo uu soo gundhig gudahood software gameplay iyo sabab la mid ah waxa ay taasi la hubiyo in user Qori looxyadii ku gudbay halkii labaad oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in sidoo kale la hubiyo in barnaamijka la baaro ka hor baxsad rasmi ah si loo hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah wax soo saarka tahay mar barnaamijka ayaa loo soo xulay si ay u hubiyaan in ay u dhaqmo Sida ugu weyn ee user.
4. xal movie The
Wixii xal sare waa in la ogaadaa in user ah waa in la hubiyo in xal filimka ayaa lagu wadaa in qiimo taas oo sida user waa ugu fiican iyo xallinta gobolka pixel dhigi. Waxay kuu ogolaaneysaa in user u leedahay nabadda ee maskaxda ugu wanaagsan ee loo doortay iyo sidoo kale u oggolaan doonaa in la hubiyo in filimka oo uu soo duubay yahay oo waafaqsan shuruudaha isticmaala.
5. hawlaha Kaladuwan
Hawlaha kale ee lagu socoto barnaamijka hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan iyo natiijada sidoo kale waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee jeer oo dhan. Waxaa ka mid ah hotkeys iyo riix si aad u muuqaalada hadal. Muuqaalada waxay u saamixi user si loo hubiyo in isticmaalka fiicnayn ee barnaamijka waxaa laga dhigay wax aan waqti iyo dadaal lumin.
Wondershare Video Convertor Ultimate kula taariikhqorihii Video waa mid ka mid ah Been software ugu guulaha badan ee la da'da ah oo casri ah. Waxay hubisaa in user helo ugu fiican iyo gobolka video oo taariikhqorihii ahaa farshaxanka in aan u baahnayn download dibadda iyo la geliyo la barnaamijka ka dhigi lahaa. Waxa kale oo ay hubisaa in user helo tafatirka ka dhigi doonaa, hoorto iyo sidoo kale dajinta ee video ah iyada oo loo marayo barnaamijka hal tan oo ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee jeer oo dhan ka dhigaysa. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa inay hubiyaan in barnaamijka la soo bixi oo lagu rakibay ka URL http://www.wondershare.com/pro/video-converter-ultimate.html in samaysay shaqada.
Tayada Top ah Wondershare Video Convertor Ultimate
Ka dib waa shanta waxyaabood ee ugu sareysa in ay u soo jiidi doona user soo galeen degsado iyo ku rakibidda barnaamijka:
Laga soo bilaabo falinjeeerka inay ku daray subtitles barnaamijka waa mid ka mid ah ugu wanaagsan si aad u hesho natiijooyinka ku jira line shuruudaha isticmaala.
Barnaamijka ma u baahan tahay lacag ay bishiiba mar user xaqa u baahan yahay in la hubiyo in lacagta la onetime la sameeyo iyo liisanka la riyaaqay u ah nolosha.
Beddelaad HEVC, 4K iyo HD waxaa sidoo kale ay taageerayaan barnaamijka iyo sabab la mid ah waxaa loo arkaa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka barnaamijyada farshaxanka oo taageera farsamooyinka ugu dambeeya ee.
By isticmaalaya barnaamijkan user la hubo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah barnaamijyada farshaxanka waxaa sidoo kale lagu sameeyey fudayd iyo qanacsanaanta ka dhigi kara. Convertor ayaa DVD sidoo kale gundhig ku darayaa in qiimaha barnaamijka mar kasta oo loo isticmaalo.
Editor ayaa video uu soo socoto waxaa barnaamijka sidoo kale wuxuu hubiyaa in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay dib u dhac kasta oo aan iyo tafatirka lagu sameeyo oo waafaqsan shuruudaha.
> Resource > Game > Top 5 talooyin aad u baahan tahay ogaato oo ku saabsan taariikhqorihii gameplay